भोलि मङ्सिर २३ गते शुक्रबार: तपाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि मङ्सिर २३ गते शुक्रबार: तपाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि मङ्सिर २३ गते शुक्रबार: तपाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् राशिफल !
admin December 9, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 236 Views
निर्धारित कार्य सजिलै पूरा हुनेछ। धार्मिक वा मांगलिक अवसर उपस्थित हुनेछ। तीर्थयात्रा हुने योग रहेको छ। रिसलिई काबु गरनुहोला। रिसको कारण पेसा वा घरमा मनमुटाव हुनेछ।
हातमा भएको कार्य समयमा पूरा नहुनाले निराशा रहनेछ। कार्य सफलतामा ढिलो हुनेछ। खान-पानको कारण स्वास्थ्य खराब हुनेछ। नयाँ कार्यको सुरुवातको लागि उचित समय रहेको छैन। अफिसमा वा व्यवसायमा अत्यधिक कार्यको कारण कार्यभारबाट थकान अनुभव हुनेछ।
आरामदायक र प्रसन्नतापूर्वक दिनको सुरुवात हुनेछ। आफन्त र मित्रसँग पार्टी पिकनिक र समूहभोजनको आयोजन गर्नुहुनेछ। नयाँ कपडा , गहना किन्ने योग रहेको छ। मनमा आनन्द रहनेछ।
दिन चिन्तारहित र खुशीमय रहनेछ। पारिवारिक सदस्यसँग विशेष समय दिनुहुनेछ र आनन्दपुर्वक समय घरमा बिताउनु हुनेछ। कार्यमा सफलता र प्रसिद्दि मिल्नेछ। साथी कार्यकर्ताको सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
तपाई तन-मनदेखि नै स्वस्थ रहनुहुनेछ। आन्तरिक सिर्जनात्मकता नया स्वरूप प्रदान गर्नेछ। साहित्य लेखनमा नयाँ प्रदान गर्नुहुनेछ। प्रिय व्यक्तिसँग भेट सुखद रहनेछ। सन्तानको प्रगतिको समाचार मिल्नेछ। विधार्थीको लागि राम्रो समय रहेको छ।
स्वास्थ्य नरम रहनेछ। मन चिन्ताले घेरिएको हुनेछ। आमासँगको सम्बन्धमा तनाव खडा रहनेछ। आफन्तसँग उग्र वाद-विवाद हुनाले मनमुटाव रहनेछ। स्वाभिमान भंग नहोस् कुराको ख्याल राख्नुहोला। पानीबाट टाढा रहनुहोला।
नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्नुहोला। भाग्यवृद्धि र धनलाभको सम्भावना रहेको छ। पारिवारिक वा व्यवहारिक कार्यको अवसरमा बाहिर जानुहुनेछ। विदेशबाट शुभ समाचार मिल्नेछ। तन-मनबाट स्वस्थ अनुभव गर्नुहुनेछ।
परिवारमा सुख शान्ति बनिरहनेछ। आफन्त र मित्रको आगमन रहनेछ। मिष्टान्न भोजन मिल्नेछ। धार्मिक कार्यमा खर्च हुनेछ। बोलीको प्रभावले अरु मान्छेलाई मोहित गर्नुहुनेछ। धन लाभ हुनेछ।
सुख र स्वास्थ्यमा सुधार एवम् पढाईमा सफलताको लागि उत्तम समय हुनेछ। विदेश व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ। आफ्नो हातले धार्मिक एवम् मांगलिक कार्य गर्नुहुनेछ। आफन्त र मित्रसँग भेट हुनेछ।
स्वास्थ्य सम्बन्धि टिपोट रहनेछ। मनमा उचाट अनुभव गर्नुहुनेछ। व्यवसायमा सरकारको हस्तक्षेप। धार्मिक कार्यमा खर्च हुनेछ। आध्यात्मिक र धार्मिक व्यवहारमा वृद्धि हुनेछ। शत्रुद्वारा समस्यामा पर्नुहुनेछ। स्त्री तथा सन्तानको चिन्ता रहनेछ।
मांगलिक कार्य र नयाँ कार्यको आयोजन गर्नुहुनेछ। अविवाहितको विवाह आयोजित हुनेछ। श्रीमती र सन्तानको शुभ समाचार मिल्नेछ। गृहस्थजीवन र दाम्पत्यजीवनमा सुख र सन्तोषको भावना अनुभव हुनेछ।
हरेक कार्य सफलतापूर्वक सफल हुनेछ। पेसा र व्यवसायमा पदोन्नति र वृद्धि हुनेछ। व्यापारीको रोकिएको पैसा मिल्नेछ। पिता तथा वृद्दबाट लाभ हुनेछ। आर्थिक लाभ र परिवारमा आनन्द छाईरहनेछ।
Previous विक्की कट्रिनाको विवाहबारे क’ण्ड’म कम्पनीले यस्तो टिप्पणी गरेपछि भयो हंगामा
Next इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी वि”स्फोटः मृ:त्यु हुनेको सङ्ख्या ३९ पुग्याे।